Ogaden News Agency (ONA) – 24ka June Waa Maalinta Caalamiga ee Taageerada Dadka la Jidh-dilay
24ka June Waa Maalinta Caalamiga ee Taageerada Dadka la Jidh-dilay
Wuxuu caalamka xusay shalay oy taariikhdu ahayd 24kii June maalinta Caalamaiga ee lagu taageero dadka jidh dilka loo gaysto (International Day in Support of Victims of Torture). Shaki kuma jiro in aafadan ay tahay dhaqan ay adeegsadaan Gumaystaha iyo guud ahaan xukuumadaha Kali-Taliska ah eek u dhisan cabudhinta shacabka.
Jidh-dilka waxaa lagu tilmaamaa dhaqan aad u xun oo xukuumadaha iyo qofkasta oo wax aanu sharci u lahayn doonaya inuu xoog ku difaaco uu adeegsado. Diimaha gaar ahaan diinta Islaamka ayaa aad uga digay falkan aadminamada ka baxsan, iyadoo Rasuulka CS uu uga digay qofka adeegsada falkaa ee bani aadamka dhangadeeya ama jidhkiisa u gaysta dhibaato inuusan raxmadda Ilaahay helaynin, Janadana aanu indhaha saaraynin.
Jidh-dilka qaanuunka dawliga ah waa mamnuuc, sidoo kale ayay dawlado badan uga mamnuuc yihiin. Waa dhaqan waxshnimo ah oo xadgudub ku ah Xuquuqul Insaanka. Jidh-dilka waxay haya’adda caafimaadka aduunka (World Health Organization – WHO) u aqoonsatay inuu ka mid yahay dhibaata caafimaad (health problem), oo waliba dad badan ay dhibaatadii ka soo gaadhay ee ama xagga jidhka ah ama xagga nafsadda ah ay la ildaran yihiin, qaar bandanna ay u godgaleen.
Dhaqankan inkastoo uu caalamka isku raacay in la joojiyo oo la maxkamadeeyo kuwa adeegsado, hadana shacabka Ogadenya waxay habeen iyo maalin la kulmaan falal haddii caalamka loo soo bandhigi lahaa ay odhan lahaayeen dadka waxan samaynaya maba aha banii aadam. Si hadaba ay u qariyaan mujrimiinta fadhiya Jigjiga ee jeelasha dadka ku gumaadaya oo aan dambiyadooda loo arag ayay waxay Itobiya xooga saartey inay go’doomiso Ogadenya oy dhagaha ka fuureysto dhaliilaha caalamkau soo jeedinayo iyo codsiyada ay haya’adaha samafalka u soo gudbinayaan in loo fasaxo inay gargaaraan shacabka ku tabaalaysan Ogadenya sida codsigii Madaxweynaha Laanqayrta Cas.
Si kastaba ha ahaatee, Hogaanka Arimaha Dibadda, Wakaaladda Filimada/HWF, jaaliyadaheena dibadda iyo haya’adaha xuquuqda u dooda ayaa dadaal dheer sameeyay sidii caalamka ay u horgayn lahaayeen dambiyada ay Itobiya ka gaysato Ogadenya. Hasa ahaatee ma dhanna dadaalkaa 1% dhibaatada ay Itobiya iyo gacan ku-dhiigalayaash Cabdi iley uu hogaamiyo ay u gaystaan shacabkeena dulman.
Waxaan Is-gara taageynaa maalintan Caalamiga ee lagu taageerayo dadkii soo marey dhibaatadan Jidh-dilka shacabkeena dulman, gaar ahaan gabdhaheena uu guamsyiga ku faraxumaynayo Ogadenya iyo kuwa ku jira qaxootiga ee sida hoose u ooyaya . Gumaysiga ma yaqaano dhaqan kale.